U-Erika Clarke noCollen Grogan bajoyina iApple ukomeleza umxholo wexesha elizayo | Ndisuka mac
U-Erika Clarke kunye noCollen Grogan bajoyina iApple ukomeleza umxholo wexesha elizayo
U-Erika Clarke kunye noCollen Grogan
Kwiinyanga ngaphambi kokubhengezwa ngokusesikweni kwe-Apple TV +, iiofisi zika-Apple zazisele zinomthamo omkhulu womxholo obhaliweyo kunye nongabhalwanga, zombini kwifomathi ebhaliweyo nakuluhlu. Ukuguqula izicatshulwa zibe zizikripthi ayingomsebenzi wonke umntu anokuwenza. Kuba qinisa elo candelo kwiApple TV +, U-Apple utyikitye abantu ababini abatsha abanamava amahle kule ndawo.
Sithetha ngoErika Clarke noCollen Grogan, ngokwamakhwenkwe ka Umhla wokugqibela. Bobabini abasetyhini babhukishwe ukuze baqinise umxholo ongabhalwanga kwiiprojekthi ezizayo. Bobabini abasetyhini baya kuxela kuMolly Thompson, ngubani Ujoyine i-Apple TV + kwi2019.
U-Erika Clarke, ebengumvelisi olawulayo kwiSpotify Studios, apho athe wakhokela khona ukwahlulahlula istudiyo kwicandelo lenkampani yaseSweden. Ngaphambi kokudlula kwiSpotify, wayekuMTV iminyaka eli-10 ebambisene kuthotho Izitya. Ujoyine iqela le-Apple uJanuwari wokugqibela kwaye uya kuhlala eLos Angeles, eCalifornia.
UCollen Grogan, ngaphambili wayekwixesha lokuPhila njengoSekela Mongameli esebenza kumxholo ongabhalwanga njenge Ndiza Ekhaya, Yizise nabanye. Wayekwangusekela mongameli wophuhliso lweMithombo yeendaba eshushu yeenyoka, inkampani yemveliso yoluhlu. Ukwaphula iAmish. Ujoyine i-Apple kwi EyoMsintsi kulo nyaka uphelileyo. Indawo yokuhlala iya kuba sisiXeko saseNew York.
Okwangoku asazi Loluphi uhlobo lomxholo oza kugxila kulo kwiinzame zakhoKodwa ngokuqinisekileyo iya kuvumela inkonzo yevidiyo yokusasaza i-Apple ukuba iqhubeke nokukhula. Ukuza kuthi ga ngoku, uTed Lasso lolona thotho luphumeleleyo kwimbali emfutshane yeApple TV +, uthotho olucekecezele phantse lonke utyumbo olwenzileyo ukusukela ekuqaleni konyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » U-Erika Clarke kunye noCollen Grogan bajoyina iApple ukomeleza umxholo wexesha elizayo
IBlack Unity Sport Band sele ithengisiwe kumazwe aliqela
Ukunqongophala kwe-chip kuya kuhlala ubuncinci kude kube phakathi ku-2022.